Shabaab oo Mamnuucday Adeegii Zaad Service Ee Shirkada Hormuud Ama Ex Barakaat DKMG oo Cambaareysay iyo Dadka Walaac Ka Muujiyay | buqaqable.net
Shabaab oo Mamnuucday Adeegii Zaad Service Ee Shirkada Hormuud Ama Ex Barakaat DKMG oo Cambaareysay iyo Dadka Walaac Ka Muujiyay
Dadka Soomaaliyeed ee Dibada iyo kuwa Gudaha dalka jooga ayaa
La dhacsanaa adeeg cusub oo ay dhowaan hirgaliyeen qaar ka
Mid ah Shirkadaha Xawaaladaha iyo kuwa isgaarsiinta ee ka jira
Soomaaliya taasoo wax badan ka badashay Noloshii dadaka Lacagtii Bacyaha iyo Jawaanada lagu wadi jirayna u badashay
sida looga nool yahay wadamada hor u maray in aan lacag jeebka lagu qaadan meeshaad doontana
wax uga gadan kartid adigoo isticmaalaya Nombaro iyo mopilkaaga kaliya hadaba Kooxaha Muqdisho
Dagaalada ka wada oo iyaga ku caan baxay in ay maalinba Barnaamij Cusub keenaan
ku dhawaaqay in ay Mamnuuceen Adeegan hadalkaasoo dad badan niyad jabiyay Bayaanka Al-Shabaab iyo waxay ku saleeyeen ) halkan ka aqriso
Sidaasi darteed ayuu Nabigeenuصلى الله عليه وسلمreebay iibsi kasta oo dhaawacaya nidmaaka dhaqaale ee islaamku jideeyay sida qishka, falisaada, khiyaamada iyo ixtikaarka. sidoo kale waxaa la reebay in dadka dhaqaalahooda xaqdarro lagu qaato ama tabaalaha haysta looga faa’iidaysto .
Cidna kama qarsoona awoodda iyo gacanta adag ee Yahuudu ku leedahay dhaqaalaha waddamada reer galbeedka ah iyo faafitaanka waxa loogu yeero Cawlamada dhaqaalaha.
Cawlamadu (economic globalization) waa qaab dhaqaale oo loo asaasay in lagu taakuleeyo danaha gaarka ah ee dowladda Yahuuda iyo kuwa reer galbeedku ka leeyihiin daafaha caalamka, si ay u maalgeliyaan dhaqaalaha wadamadooda iyagoo ku tumanaya xuquuqda dowladaha iyo dadka taagta daran.
Waxey kaloo ugu talagaleen sidii qurbajoogta Soomaaliyeed u isticmaali lahaayeen adeeggaasi marka ay eheladooda lacagta u dirayaan maadaama isha labaad ee ugu weyn dhaqaalaha waxa loogu yeero wadamada soo koraya uu ku tiirsanyahay lacagaha dibadaha ay ka soo diraan dadka qurbajoogta ah.
Taas marka la fiiriyo, waxaa la oran karaa yoolka Mareykanka ee ah in la faafiyo adeegga MMT ayaa ah mid qaab qorshaysan oo qotodheer ku socda, laguna doonayo in dhaqaalaha Muslimiinta iyo hantidooda gacanta lagu dhigo. Waana waxa keenay in adeeggan uu yahay mid aad uga dhex muuqda waddamada soo koraya iyadoo gebi ahaanba aan laga isticmaalin dalalka loogu yeero wadamada waaweyn sida Mareykanka.
Kadib markii si qotodheer loo baaray saamaynta xun ee nidaamkan ku leeyahay dhaqaalaha bulshada Soomaaliyeed ee Muslimka ah iyo ujeedooyinka gurracan iyo weliba dhagarta ay reer Galbeedka iyo Yuhuuddu ka leeyihiin hirgelintiisa ayaa waxaa muuqday in hadafkoodu yahay sidan soo socota :
Gacan ku haynta dhaqaalaha dadka danyarta ah iyo ku xad-gudubkeeda: Shrikadaha taakuleeya adeeggan ayaa waxay dadaalkoodii isugu soo aruuriyeen waddamada dhaqaalohoodu uu hadda soo kacayo kuna yaal Africa iyo Asia, Taasoo ka dhigeysa shucuubta dalalkaasi dad aan marnaba ka maarmin adeega MMT, iyadoona looga faa’iideysanayo baahida ay u qabaan adeeg xawaaladeed si fudud oo degdega ah lacagaha ugu kala xawilanayaan, halka dhaqdhaqaaqa lacageed iyo kala xawilaadda lacagaha si toos ah loo hoos geynayo dawladaha reer galbeedka
Dabasocodka dhaqaalaha reer galbeedka:Adeegga MMT ayaa suurtagalay kadib heshiis dhex maray shirkado isgaarsiineed iyo bangiyo caalami ah oo shirkadda MasterCard ee Mareykanka dhexdhexaadiye u aheyd. Dhamaan shirkadahan ayaa ah kuwo ka wada shaqaynayey sidii ay suuqa dhaqaalaha adduunka gacanta ugu dhigi lahaayeen isweydaarsiga dhaqaaluhuna iyaga ugu koobnaan lahaa. Arrinkan ayaa ah mid yaraynaya lacagaha kaashka ah, kana dhigaya bulshada oo dhan mid hoos timaada una afduuban gaalada reer galbeedka.
Khalkhal gelinta badqabka dhaqaalaha Muslimiinta:Adeeggan ayaa ah mid halis ku ah.badbaadada ummadda Muslimka ah, gaar ahaan Mujaahidiinta, sababtoo ah waxaa loo adeegsan karaa waxa loogu yeero ‘ladagaallanka fangareynta argagixisada’ taasoo ah marmarsiyo lagu doonayo in lagu bannaysto xoolaha, xuquuqda iyo xorriyada dadka Muslimka ah, dhaqaalahoodana lasoo fara geliyo, isla markaana lagu hayo xilli walba handadaad joogta ah.
Khatarta uu leeyahay hadii adeegga la joojiyo ama uu burburo:Waxaa si fudud adeeggan amar ugu joojin kara siyaasiyiinta reer galbeedka iyagoo u cuskanaya eedeymo aan sal iyo raad toona lahayn sidii hore ugu dhacday shirkaddii ‘Barakaat’. Waxaa kaloo dhici karta in shirkaddu dhaqaala beesho, taasoo dhibaato baaxad leh iyo khasaare aan laga soo kaban dhabarka u saari karta shacabkeena Muslimka ah.
Khatarta Xatooyada Xeeladeysan (Hacking):Moobilada oo ah qalab u nugul xatooyada xeeladeysan ayaa ah mid saamayn weyn ku yeelan karta dadka adeeggan isticmaala..
Suuqa oo laga saaray lacagta warqadda ah:khatarta ugu weyn ee garab socota adeeggani ayaa waxaa ka mid ah in lacagta warqadda ah suuqa ka baxdo, sababtoo ah adeega MMT waxaa horraantiisiiba loo qorsheeyey in uu lacagahoo dhan meel isugu keeno kadibna lagu taakuleeyo dhaqaalaha reer galbeedka ee hadda sii burburaya.
Xawaaladihii oo meesha ka baxaya:Faafitaanka adeeggani wuxuu burburinayaa xawaaladihii ay dadku badanaa isticmaali jireen. Haddii uu sidaas ku sii socdona wuxuu adeeggan gebi ahaanba suuqa ka saarayaa xawaaladaha kuna khasbayaa dadka inay MMT oo keliya ku koobnaadaan.
MMT wuxuu bulshada u sanduleynayaa shirkadaha adeegan bixiya:sii faafitaanka adeegga MMT ayaa wuxuu sababayaa in dhaqaalaha malaayiin ka tirsan shacabka muslimka ah si buuxa gacanta uu ugu jiro shirkadaha reer galbeedka ee taakuleeya adeeggan. Taasoo ka dhigeysa adeegga MMT mid uu saameeyo isbeddel kasta oo dhaqaaleed ama siyaasi ee ku yimaada shirkadaha maalgeliya MMT.
In dhamaan Soomaaliya laga joojiyo isticmaalka adeegga MMT. Shrikadaha adeegan dadka usoo bandhigay, gaar ahaan Hormuud, Golis iyo Telesom, waa inay joojiyaan adeeggan. Waxaan filaynaa dhamaan shirkadaha, macaamiisha iyo dadka isticmaala adeegga ZAAD/SAHAL in ay amarkan ku dhaqaaqi doonaan.
Shirkadaha adeegan qaybiya waxay haystaan ilaa 24 – 02- 1432Hijrioo ku beegan31.01.2011si ay usoo afjaraan adeegan, islamarkaana wixii waajibaat ah ee ka saran adeegga u dhameystiraan.
Waxaan uga digaynaa shirkadaha ku haminaya in adeega MMT oo kale keenaan Soomaaliya in ay ka joogsadaan.
Go’aankan wuxuu hirgelayaa laga bilaabo marka uu bayaankan soo baxo.
Ugu dambayntii, waxaan ku dhiiri gelinaynaa dadka Muslimka ah ee Soomaaliyeed in ay iska xoreeyaan sandullaynta reer galbeedku ku hayaan isla markaana raadsadaan beddel xalaal ah oo lagu kalsoon yahay sida dhoofinta dalagyada gudaha, warshadaha yaryar, iyo mashruuc kasta oo xalaala waxtarna u leh dhaqaalaha dalka. Waxaan kaloo ogaysiineynaa Muslimiinta Soomaaliyeed in aanaan marnaba ka caajiseyn difaaca aan iyaga iyo maalkoodaba ka difaacayno wax kasta oo khatar gelinaya.
﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾
ذو القعدة 1431 هـ الموافق لأكتوبر 2010 م
« Ciidan uu Hogaaminayo Col.Bare Hiiraale Ayaa Dagaal Kula Wareegay Gacan Ku Heynta Magaalada B – Xaawo Raisul-wasaare Farmaajo oo Ku Dhawaaqay in uusan 4.5 Ku Soo Xuli Doonin Xukuumada uu Soo Dhisi Doono Dhowaan »